Tours Xalaal - eHalal Safarka Mart
Featured Tours Xalaal
1 Maalin Duug ah iyo New Delhi Xalaal Dalxiis oo leh Rickshaw Ride & Cunto Xalaal ah
Delhi - Hindiya
Booqasho ku tag Jama Masjid, oo ka mid ah masaajidda ugu waaweyn Hindiya ka hor booqashada India Gate.
Dalxiis 2 Maalmood oo lamadegaanka laga bilaabo Marrakech ilaa Zagora oo leh cunno Xalaal ah
Waxaan sii wadi doonnaa wadada aan u aadayno Zagora ee ka gudubta Buuraha Anti-Atlas ee maraya tuulada Berber ee Agdez iyada oo ay la socdaan kumanaan geedo timireed ah oo dhan ilaa Dooxada Draa oo ah dooxada timirta ee ugu weyn Morocco.
3 Maalmood Cameron Highlands Xalaal Dalxiis
Safarkaagu wuxuu ka bilaabmayaa magaalada Kuala Lumpur waxaadna u sii socotaa dhinaca woqooyi dhanka Cameron Highlands, oo ku taal Gobolka Pahang, qiyaastii 1542 mitir oo ka sarraysa heerka badda
Booqashooyin Sax ah
3 maalmood Chiang Mai Way of Life
Magaalada Chiang Mai
Riwaayadda galabnimadu waxay ka bilaabataa safar daqiiqado ah oo 45 daqiiqo ah oo lagu raaco Wabiga Ping, iyadoo nolosha lagu qaadanayo wabiyada
3 Maalmood Oo Sixiroonaya Ayutthaya @ Sala Ayutthaya
Wuxuu ka bilaabmayaa Bangkok
Safar dib ugu noqo waqti hore magaalada qadiimiga ah ee Ayutthaya, caasimadii hore ee Boqortooyada Siam. Tani waxay ahayd deked ganacsi oo caalami ah barwaaqo 1350 ilaa 1767 ..
3 Maalmo Habitat Penang Xalaal Dalxiis
Habitat, waa jardiin lagu nasto oo ku taal Penang Hill, waa waddo gaaban oo u jirta George Town
3 maalmood Singapore Xalaal Joojinta
Xidhmadayada 3-da Maalmood ee Singapore Xalaal Joojinta Xalaasha ah waxaa ku jira Quraacda Xalaal maalin kasta ee Qolka Deluxe ee Marina Mandarin Hotel Singapore.
4 Maalmood Brunei Darussalam Xalaal Dalxiis
La kulan & salaam hagaha dalxiis ee maxaliga ah markaad duulimaadka timaado Madaarka Caalamiga ah ee Brunei. Ku sii wad wareejinta iyo soo galitaanka hoteelka.
Booqashooyin Jacayl ah
La kulan oo ku salaam hagahaaga gaarka ah ee socdaalka una wareeji hudheelka si aad uga soo gasho Mercedes Benz S-class. VIP Socdaalka degdegga ah ee imaanshaha iyo helitaanka qolka nasashada ee VIP ka hor safarka Bangkok
4 Maalmood Loei Gobolka - Midabada Dhaqanka Mekong
Ka dib markaan imaado garoonka diyaaradaha, waxaan ku raaxeysan doonnaa qado maqaaxi maxalli ah ka hor inta aan baabuur u aadin Degmada Chiang Khan ee Ban Na Pa Nhad halkaas oo aan booqanno Xarunta Dhaqanka ee Tai Dam iyo Matxafka.
4 Maalmood Waqooyiga Sulawesi Xalaal Dalxiis
Waqooyiga Sulawesi - Indonesia
Safarkan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku ogaato Waqooyiga Sulawesi afar maalmood gudahood. Waxaad booqan doontaa seeraha dabiiciga ee Tangkoko, oo ah
oo kutaala sagxadda Buurta Dua Saudara
6 Maalmood Galbeed Sumatra Xalaal Dalxiis
West Sumatra waa qurux qurux badan oo kaladuwan. Maaddaama waddooyinku cidhiidhi yihiin oo masaafad dheer yihiin, waxaan u qorsheynay safar aan ugu raaxeysanno West Sumatra xawaare aad u dheereeya iyadoo aan maalmaha oo dhan lagu qaadan gaariga.
Dalxiiska Magaalada Denpasar Bali Xalaal
Dalxiisku markuu dhammaado ka dib, waxaan booqan doonnaa makhaayad muslimiin ah oo u adeegta cuntada Xalaal. Salaada waxaa lagu qabanqaabin karaa masaajid maxalli ah.
Safarka Cuntada Xalaasha ah ee Marrakech
Socdaalkan 3-saacadood ah waa waayo-aragnimo gaar ah oo lagu ogaanayo qeybaha kala duwan ee cunnooyinka Xalaal ee Morocco, taariikhdeeda, alaabta ceyriinka ah ee la isticmaalay, cuntooyinka sirta ah, diyaarinta iyo, tan ugu muhiimsan, dhadhaminta.
Safarka Maalinta Malacca Xalaasha Xalaasha ah
Dalxiiskan maalinta oo dhan ah wuxuu kuu keenayaa Malacca, oo ah magaalo taariikhi ah oo ku taal meel 150 km u jirta Kuala Lumpur iyo magaaladeeda
xarunta ayaa lagu dhawaaqay inay tahay Goob Hidaha UNESCO.
Ku jiifso Chiang Mai habeenkii cashada fiidkii safar xeebeedka biyo qabow ee Mae Ping River. Waxaan ku dalxiis tagi doonnaa qaab ahaan waxaanna u bogaadinnaa is-beddelka muuqaalka hareeraha webiga
Jungfraujoch Top of Europe Day Travel from Interlaken with Halal cunto fudud
Ku quusin naftaada quruxda badan ee Alpine Wonderland safarkan maalin la hanuuniyey ee ka socda Interlaken ilaa Top of Europe.
Kota Tua Jakarta Dalxiis Cunto Xalaal ah
Sidoo kale waxay la mid tahay cunnooyinka halista ah ee caanka ah ee reer Indonesia ee xalaasha ah oo runtii ka tarjumaya sheekooyinka dhaadheer iyo kuwa waaweyn ee Batavia.
Safarka Weyn ee VIP Langkawi oo ay weheliyaan Qado Xalaal ah & BMW 7
Ka bilow kalfadhi wadarta raaxeysiga oo ah muuqaalka TUULADA ARIENTAL ee Langkawi ka hor inta aan lagaa qaadin 709m oo ka sarreysa heerka badda iyada oo safar xiiso leh ay u socoto LANGKAWI CABLE CARLE.
Bogga koowaad12>Bogga ugu dambeeyay
eHalal Safarka Mart > Dalxiisyo Xalaal ah